Uphengululo lwangaphakathi lweNest Cam IQ | Ukujongwa kwevidiyo yasekhaya | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Ikhamera
Namhlanje sikuzisa Uphengululo lwangaphakathi lweNest Cam IQIkhamera entsha yokhuseleko yangaphakathi esuka kwiNest brand enoyilo olunonophelo kunye nomgangatho womfanekiso okhethekileyo usinika uluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka ukuphucula ukhuseleko kumakhaya ethu. I Akukho mveliso ifunyenweyo naphakathi kweempawu zayo eziphambili Inzwa ye4K kunye nokuqhubela phambili kwayo inkqubo ukuqondwa phambili Iyakwazi ukwahlula iintlobo ezahlukeneyo zezandi, ukwahlula phakathi komntu kunye nento nokuba aqaphele obu ubuso buqhelekile kobo bungezo. Ukongeza, enkosi kwi-Nest app ye-smartphone yakho kunye nokukhetha ukubhalisela iNest Aware, i-Nest CAM IQ yangaphakathi iba yinkqubo yokujonga ividiyo.
1 Iinkcukacha zeNest Cam IQ Tech
2 Iimpawu zeCam IQ
3 Faka kwaye uqwalasele iNest Cam IQ
4 Ngaba uNest uyazi ewe okanye hayi?
5 Uyithenga phi iNest Cam IQ?
8 Uyilo oluhambisa umgangatho
Iinkcukacha zeNest Cam IQ Tech
Iimpawu zobugcisa ze ikhamera yokujonga ngaphakathi zezi zilandelayo.
I-Nest Cam IQ
Ikhamera «1/2 isivamvo I-intshi ezi-5 kunye nee-megapixels eziyi-8 (4K) Ukusondeza kwedijithali ye-12X I-HDR »
Inqaku lembono 130º
Umbono wasebusuku Amandla e-infrared LEDs aphezulu (940nm)
Ividiyo Ukuya kwi-1080p nge-30fps
evakalayo Somlomo kunye nee-microphone ezi-3
Conectividad «I-Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2 4 GHz okanye i-5GHz) Amandla eBluetooth ePhantsi (BLE) »
Ixabiso Akukho mveliso ifunyenweyo
Tamaño "Shumi 4 cm ukuphakama 7 4 cm ubude 7 Ubunzulu be-4 cm »
U bunzima I-357 gram
Njengoko ubona, iNest Cam IQ iyimveliso enamandla, ene- indawo ebanzi yokujonga kwaye iyakwazi ukurekhoda imifanekiso esemgangathweni emini nasebusuku.
Iimpawu zeCam IQ
Ngokukhawuleza nje ukuba ufake usetyenziso lwakho (olufumanekayo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android) esinazo inani elinomdla lokukhetha. Singa bukela ividiyo ngexesha lokwenyani, mamela isandi okanye Nditsho nokuthetha kwisithethi ikhamera ukude. Kwakhona ukuba sibhalisile kule nkqubo Isilumkiso se-Nest Siza kuba nokufikelela kwimbali yokurekhoda efini, ukucwangciswa kwemimandla yomsebenzi kunye nezaziso zobuso obaziwayo.
Ikhamera isithumela isilumkiso kwifowuni ephathekayo okanye kwi-imeyile, isilumkisa ngalo lonke ixesha ifumanisa nayiphi na intshukumo okanye isandi, sikwazi ukubona kwimizuzwana embalwa ukuba sisisongelo sokwenyani okanye iialamu ezingezizo. Ikwavumela ukuba uyiqwalasele ikhamera iyakuqonda ukuba usendlini okanye akunjalo ngeGPS yeselfowuni ukuze uyiqwalasele ukuba isebenze ikhamera xa usekhaya kwaye ke uyithintele ekuqhubekeni ikuxwayisa ngokufunyanwa ngakunye. Ukuba uyafuna, endaweni yokwenza ngokuzenzekelayo ngeGPS yeselfowuni, unokuyilungiselela ngexesha elithile okanye ubonise ngesandla iapp xa ushiya kwaye ungena endlwini, kodwa ezi ndlela zibonakala zingonwabisi kakhulu ukuzisebenzisa.
Ngalo lonke ixesha ibhaqa umntu omtsha esinako bonisa kwi-app ukuba ngumntu owaziwayo okanye hayi; Kamva xa ikhamera ifumanisa umntu omnye iya kubonisa ukuba ngumntu esimaziyo. Olu khetho lusebenza kakhulu, nangona unokwenza iimpazamo xa umntu omnye ekunye okanye engenazo iiglasi, eneentlobo ezahlukeneyo zeenwele, njl. Kodwa phawula zombini iifoto njengomntu owaziwayo kwaye akukho ngxaki iphambili.
Njengengongoma engalunganga, iapp ayinamanzi njengokuba umntu ebenokunqwenela. Oku kusenokwenzeka ukuba kungenxa yokuba imfuno ye-bandwidth xa usasaza ividiyo ngexesha lokwenyani igcwalisa inkqubo, ukuze siye kwimenyu enye siye kolunye kuya kufuneka silinde ixesha elide kunokuba sinqwenela.
Faka kwaye uqwalasele iNest Cam IQ
Inqaku lokuqala ekufuneka silikhethile ngokukhawuleza xa sikhupha ikhamera yile uyibeka phi. Into eqhelekileyo ihlala isegumbini lokuhlala eliphambili ukuze ujonge umnyango wokungena kunye nokungena kumagumbi. Ikhamera akukho bhetri ke kuya kufuneka sikhethe indawo ethe tyaba ngokufikelela kwiplagi; nangona oku ayongxaki enkulu njengoko intambo inde kakhulu.
La ukuseta ikhamera kulula kakhulu enkosi kwi-Nest app; Kuya kufuneka ukongeze isixhobo, jonga ikhowudi yeQR uphuma ezantsi kwekhamera ulinde imizuzwana embalwa. Emva kwexesha izakusicela i Idatha yokufikelela kwiWifi ukuze ukwazi ukusasaza ividiyo ekusasazeni kwaye ngale nto yonke into ilungile. Njengoko ubona, yimizuzu nje embalwa kwaye ikukufikelela kubasebenzisi abancinci be-tech-savvy.
Nje ukuba ikhamera isebenze, kufuneka siyimise ngendlela esithanda ngayo nazo zonke iindlela ezikhoyo: ukuqaphela ubuso, izaziso zokulumkisa, ukhetho lokubona ukuba sisendlwini okanye akunjalo, njl.
Ngaba uNest uyazi ewe okanye hayi?
I-Nest Aware yi inkqubo yobhaliso apho sinokwandisa ukusebenza kwekhamera yeNest. Izinketho esinika zona zi:
Ukurekhoda okungayeki kunye nokugcinwa kwelifu
Izaziso zobuso obuqhelekileyo
Useto lwendawo yomsebenzi
Yenza kwaye ugcine iiklip
Inguqulelo yasimahla igcina kuphela iiyure ezi-3 zevidiyo, ngelixa sikhetha ukuhlawulwa sinokuba neentsuku ezili-10 okanye ezingama-30 zevidiyo ngokuxhomekeke ekubeni sikhetha ukhetho lwe- € 10 okanye i- € 30 ngenyanga ngokwahlukeneyo. Makhe sijonge umahluko ngokweenkcukacha ezingaphezulu.
Ukusasaza ngqo Ewe Ewe Ewe
Imbali yevidiyo yefu Iiyure ezi-3 Iintsuku ze10 Iintsuku ze30
Izilumkiso "Umntu intshukumo nesandi » «Umntu (ngokufumanisa ubuso) intshukumo nohlobo lwesandi » «Umntu (ngokufumanisa ubuso) intshukumo nohlobo lwesandi »
Imimandla yomsebenzi Hayi Ewe Ewe
Indalo kunye neziqeshana Hayi Ewe Ewe
Ixabiso Mahala I-10 ye-euro ngenyanga okanye i-100 ye-euro ngonyaka I-30 ye-euro ngenyanga okanye i-300 ye-euro ngonyaka
Isigqibo sokuthenga okanye ukungatyi iNest Aware kuxhomekeke kuhlobo losetyenziso esifuna ukunika ikhamera, kodwa ngokoluvo lwethu ukhetho olukhululekileyo lwanele kusetyenziso olumndilili lolu hlobo lweenkqubo.
Uyithenga phi iNest Cam IQ?
I-Nest Cam IQ iyafumaneka kwivenkile ekwi-Intanethi okanye kuyo Akukho mveliso ifunyenweyo. en omabini amaqonga amaxabiso ayo yi- € 349 ungathenga ngejelo elilungele wena.
Inkqubo ingqalelo Advanced
Uhlelo lokusebenza alunamanzi kakhulu
Inkqubo yokubhalisa ebiza kakhulu
Uyilo oluhambisa umgangatho
Into yokuqala esiyibonayo kwakamsinya nje xa sichukumisa ibhokisi yeNest Cam kukuba sijongane nemveliso apho ukuhambisa umfanekiso osemgangathweni kubalulekile. Zombini uyilo lwekhamera yangaphakathi kunye nezinye izinto (ukutshaja intambo, izihlanganisi kunye nokupakisha uqobo) kuyenziwa kukhathalelwa zonke iinkcukacha zokugqibela. Inkqubo ye- izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye imnandi kakhulu ekuphathweni. Inkqubo ye- Uyilo lwekhamera lincinci kunye nombala omhlophe omsulwa owenza ukuba ulunge kulo naluphi na uhlobo lwasekhaya ngaphandle kokungqubana.
Ubunzima bayo buphezulu kakhulu, kodwa ayisiyongxaki le kodwa yinto eluncedo kuba yinto engaqhelekanga ukuhamba rhoqo kwaye ubunzima buyinika uzinzo olukhulu oluthintela ukuba lungawi nakuphi na ukubetha.
Ngamafutshane, ikhamera yeNest Cam IQ yiyo Inketho elungileyo yokuba nenkqubo yokujonga ekhaya ngokulula kwaye kulula ukuhlangana. Ukusebenza kwayo kulula kwaye kusivumela ukuba silawule ukhuseleko lwasekhaya ukusuka kwiselfowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ikhamera » Uphengululo lwangaphakathi lweNest Cam IQ